ढोरपाटन महोत्सब : कृषि पदर्शनीमा कृषकहरुको उत्साहजनक सहभागिता ! – ebaglung.com
ढोरपाटन महोत्सब : कृषि पदर्शनीमा कृषकहरुको उत्साहजनक सहभागिता !
२०७५ बैशाख २, आईतवार १८:४०	Top News, थप समाचार
छविलाल पाण्डे, बुर्तिवाङ २०७५ बैशाख २ । बुर्तिबाङमा सञ्चालित ढोरपाटन महोत्सबको अबसरमा गरिएको कृषि प्रर्दशनीले दर्शकहरुबीच प्राथमिकता पाएको छ । कृषि प्रदर्शनी अन्तर्गत यस क्षेत्रका कृषकहरुले आलु, बन्दा, केरा, मेवा, मुला, फर्सी, रायो, धनीया, भुंई स्याउ, मेवा, प्रर्दशनीमा राखेका छन् ।
बढिमात्रामा ढोरपाटन नगरपालिका अन्तर्गत वडा नं १ भब्रेटा, वडा नं २ सलामकोट, वडा नं ३ पुर्काट, लगाएत अन्य बिभिन्न स्थानबाट कृर्षि उपज प्रर्दशनीमा राखिएको हो । त्यस्तै कृषकहरुले आफुले पालेका खसी, बोहा, गाई भैसीको घ्यू, मह, लगाएतका बस्तु प्रर्दशनीमा राखिएको छ ।
प्रर्दशनीमा राखिएका बस्तुमध्य उत्कृष्टताको आधारमा छनौट गरेर कृषकहरुलाई पुरस्कृत गरिने कृषि प्रर्दशनी कार्यक्रमका सम्योजक ज्ञानप्रसाद कंडेलले ईबागलुङलाई बताए ।
महोत्सबमा पचास हजार भन्दा बढी दर्शकले अबलोकन गर्ने र अपेक्षाकृत आर्थिक कारोबार हुने आयोजकले बताएका छन । त्यस्तै १ सय २० स्टलमार्फत फरक फरक तवरका ब्यबसायिक बस्तु बिक्रिका लागि राखिएको छ । महोत्सबका कारण प्रर्यटकीय स्थल ढोरपाटन लगाएत यसक्षेत्रको प्रचार प्रसार र स्थानीय उत्पादन बिक्री बितरण मार्फत मुनाफा आर्जनमा सहयोग पुग्ने स्थानीयको अपेक्षा छ ।
महोत्सवमा उँटको नाँच र अस्ट्रिज चरा हेर्नेहरुको पनि भीड लागेको छ ।
ढोरपाटन महोत्सवको दोश्रो दिन : पञ्चेबाजा प्रतियोगिता, लोकगायकबाट सांगीतिक प्रस्तुती !
बेल्जियममा नयाँ वर्ष तथा नेपाल महोत्सव सम्पन्न : लगानी र पर्यटनको लागि नेपाल सुरक्षित – राजदूत थापा